UMNYANGO wezeMpilo KwaZulu-Natal ngokuhlanganyela neNyuvesi yaKwaZulu-Natal bathule ngokusemthethweni uhlelo lokugcinwa kwezikhwama zobisi lwebele (human milk banks) ezibhedlela ezahlukene zakulesi fundazwe ngenhloso yokusiza abantwana abazelwe.
Lo mkhankaso othulwe ngeledlule kuhloswe ngawo ukukhuthaza omama ukuba bancelise abantwana babo ubisi lwebele okungenani izinyanga eziyisithupha zokuqala.Ukuthulwa kwalolu hlelo kulandela ikhwelo elishaywe uNgqongqoshe wezeMpilo kazwelonke uMnu Aron Motsaoledi ukuba kuvulwe izindawo zokugcina ubisi lwebele ngenhloso yokusiza nalabo bantwana abangasenabo omama.
Luzophinde lusize futhi nalabo bantwana abazalwe ngaphambi kwesikhathi, nalabo omama abasuke bengakalulami kahle emva kokubeletha ukuthi bangancelisa. Okhulumela inhlangano yakwa-Community Media Trust uNkk Elizabeth McGregor uthe ngokocwaningo olwenziwe kukhombisa ukuthi lapha eNingizimu Afrika bancane kakhulu abesifazane abancelisa abantwana babo ubisi lwebele, okungumthelela wokunyuka kwezinga lokushona kwabo.
“Ocwaningweni olenziwe ngo-2009 kukhombisa ukuthi bangu-62 kwabayi01000 abantwana abashonayo kuleli zwe bengakafiki eminyakeni emihlanu okwenziwa ukungondleki kahle. Yize ucwaningo olwenziwe ngo-2012 kulesi fundazwe lukhombise ukuthi siyehla isibalo sabantwana abashonayo emva kokuzalwa, asikafiki esibalweni esibekwe i-United Nations ukuthi babe ngaphansi kwabangam-20 kwabayi-1000 abashonayo. Yingakho sibone kufanele ukuba sithule lo mkhankaso ozokhuthaza abesifazane ukuba bancelise abantwana ubisi lwebele okungenani izinyanga eziyisithupha bezelwe. Sisungule izikhwama zokugcina ubisi lwebele oluzogcinwa ezibhedlela ezahlukene futhi sikhuthaza omama abaphilile ukuba banikelele ngobisi lwebele.
UMqondisi we-Integrated Nutrition Programme ngaphansi koMnyango wezeMpilo uNksz Leonare Spies uthe: “Esikhathini esiningi abantwana bashona ngenxa yezinkinga zokuphefumula, kodwa isizathu esikhulu kunazozonke ukungondleki kahle. Ngokocwaningo kuleli zwe bancane kabi abesifazane abancelisa abantwana ubisi lwebele. Ubisi lwebele lubalulekile futhi lunganqanda nezifo eziningi.
Omunye womama asebeqalile ukunikelela ngobisi uNksz Khanyi Nzama uthe ngobisi lwakhe lodwa ukwazile ukuncelisa abantwana abangu-26 ngonyaka odlule